Daafaca Kooxda Ajax Matthijs de Ligt ayaa ku biiri kara kaliyah labo Kooxood sida macalinkiisa sheegay xilli 8 Kooxood oo Yurub ah ay doonaayaan. – Somali Sounds
Macalinka Kooxda Ajax Amsterdam Erik den Hag ayaa sheegay in xiddiga hogaamiya kooxda Ajax uu ku biiri doono laba kooxood midkood ayadoo aysan jirin fursad uu Ajax kaga mid ahaan doono xagaaga kadib.
Macalinka ayaa sheegay in Kooxaha Barcelona ama Bayern Munich midkood uu ku biiri doono 19 sano jirkaas heerka caalami ee dalka Holland.
Juventus iyo Manchester City ayaa De Ligt loola xiriirinaaye waliba si dhaw nalse aysan hada u muuqan mid macquul ah waxaana macquul ah inuu Barcelona kula midoowo saaxiibkiis Frankie de Jong oo Ajax kaga biiri doono Kooxsa Bluagrana dhamaadka xilli ciyaaareedkaan.
Milkiilayaasha haatan ee United Joel iyo Avram Glazer ayaa la fahamsan yahay inay durbadiiba tilmaameen…